Qalabka & Wararka Qalabka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Dhaqdhaqaaqa Lawn Mowers-Joogtaynta Quruxda Dharkaaga
Shaqadaydii iigu horreysay waxay ahayd jarista cawska. Magaalada Miami, cawskani wuxuu ka baxaa meel kasta. Waxaad uun soo saaraysa caws-jarayaashii, soo lugee xaafadda, cawsna ka gooyey. Qalabka jaray wuxuu hagaajin karaa […]Read More
Doorashada shirkad leh khibraddan badan ayaa ah tan ugu muhiimsan maxaa yeelay tayada wax soo saarkooda ayaa wax weyn ka beddeli karta tayada sawirradaada. Waa inaad kubilaawdaa baaritaanka shirkada si aad u ogaato waxa laga filan karo. U fiirso boggooda si aad fikrad fiican uga hesho […]Read More
Bixiyeyaasha Qalabka Kumbiyuutarka iyo Software-ka
Markaad iibsaneysid kumbuyuutaro, waxaad iibsaneysaa oo keliya kumbuyuutarka laftiisa laakiin sidoo kale waxaad iibsaneysaa qaybo kala duwan oo ka kooban. Mid ka mid ah waxyaabaha noocaas ah waa kuwa keena qalabka kombiyuutarka iyo softiweerka. Alaab-qeybiyeyaasha qalabka kombiyuutarka / softiweerka waxaa loogu yeeraa qayb-qeybiyeyaal, maxaa yeelay dhab ahaantii waxay bixiyaan badeecooyin badan oo aad u baahan tahay inaad needRead More
Bixiyeyaasha mindida waa inay gacan ka geystaan ​​bixinta alaabada tayada wanaagsan
Shirkadaha mindiyaha ayaa ku baxsan kara iyagoo ku bixiya qiimo jaban mindiyohooda sababtoo ah alaab-qeybiyeyaasha kuma qasbana inay sidoo kale keenaan alaabada. Laakiin hadaad jeceshahay inaad macaamiishaada siiso wax soo saar tayo wanaagsan leh, markaa sahaydaasi waxay u baahan tahay in la keeno iyadoo la raacayo dammaanadaha lagu sheegay baakada shirkadda. Noocyada qalabka […]Read More
Qalabka Shirkadaha Qalabka - Sida Loo Helo Qiimaha Ugu Fiican
Doorashada alaab-qeybiyeyaasha saxda ah ee alaab-qeybiyeyaasha ayaa muhiim u ah guushaada tafaariiqle ahaan. Celcelis haweeney guri joog ah ayaa sameyn karta keydinta nafteeda; laakiin haddii aad hadda bilowdo oo ganacsigaagu ku tiirsan yahay iibka, markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato cidda aad wax ka iibsanayso. Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad hubiso inaad heshay qiimaha ugu hooseeya ee […]Read More
Ilaha isha ku haya Kuwa Qalabka Awooda
Meheraddaadu ma tafaariiqle baa tahay mise waxaad leedahay aqoon isweydaarsi guri? Haddii aad u baahan tahay qalab koronto oo aqoon isweydaarsigaaga ah, waxaad ka heli kartaa alaab-qeybiyeyaasha oo ku baahsan waddanka oo dhan. Haddii aad kaliya tahay isticmaale guryaha ka mid ah qalabka korontada, waxaad ka heli kartaa dhowr alaab-qeybiyeyaal si loo daboolo baahiyahaaga. Kaaga […]Read More